शैलेन्द्रको 'निर्वेद' बजारमा
काठमाडौं- लेखक शैलेन्द्र अधिकारीको कृति 'निर्वेद' सार्वजनिक भएको छ।
युवा जोगीको कथा लेखिएको कृतिलाई शनिवार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्ष सचिव प्रा. जगतप्रसाद उपाध्याय ‘प्रेक्षित’, त्रिभुवन विश्वविध्यालयका उप प्राध्यापक सुदिप पोख्रेल, साहित्यकार रूपक अलङकारले सार्वजनिक गरे ।
कृतिमा संरचनात्मक र प्रयोगले नयाँपनको खोजी गरिएको छ। आख्यानकार अधिकारीले साना कथाहरूका रूपमा पढ्न सकिने स-साना कथाहरूलाई उनेर उपन्यास बनाएका छन् ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्ष सचिव प्रा. ‘प्रेक्षित’ले कृतिले नेपाली साहित्यमा पृथक यात्रा गर्नेमा आफू ढुक्क रहेको धारणा व्यक्त गरे। उनले नेपाली साहित्यको उनन्यन र प्रवर्द्धनमा निर्वेद जस्ता उपन्यासले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।
प्रगतिशील विचारधारामा आस्था राख्ने लेखकको कृति र व्यक्तित्वमाथि साहित्यकार अलङ्कारले प्रकाश पारे । कृतसमाथि लक्षित गर्दै उनले उपन्यास दार्शनिक हिसाबले उत्कृष्ट रहेको बताए । 'मान्छेहरूले बिर्सिसकेको कथालाई कलात्मक रूपमा लेखिएको छ । दैनिक जीवन र लोकव्यवहारलाई पनि लेखकले उत्कृष्ट तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभएको छ,' साहित्यकार अलङ्कारले भने, 'प्रगतीशिल विचारधारा आस्था राख्ने लेखकले आस्थिक रूपमा पूर्वजन्म र परोजन्मको विषय उठान गर्नु आफैंमा सुन्दर विषय हो ।'
दर्शनका खातलाई उपन्यासमा राख्दैमा उपन्यास राम्रो नहुने कुरालाई लेखकले बडो सुन्दर तरिकाले विचार गरेर कृति लेखेको पनि उनले बताए ।
उपन्यासका बारेमा बोल्दै लेखक शैलेन्द्रले आफूले बोल्ने समय सकिएको धारणा व्यक्त गरे । उनले आफूले उठाएको विषयवस्तु नविन र फरक रहेको दाबी समेत गरे । 'मैले उठाएको विषय अरू कसैले नलेखेको भएकोले जोखिम उठाएको हुँ,' उनले भने ।
पुस्तक शिखा बुक्सले प्रकाशन गरेको हो ।
राजानन्दको 'सिमानामा पर्खाल लगाऔं' गीत सार्वजनिक [...
गायिका कनिकाले कोरोनालाई जितिन्, पाँचौँ रिपोर्ट न...
महिला श्रमिक र सुरक्षाकर्मीका लागि प्रियंका चोपडाको...
कमैयाको झुपडीमा निभेको चुल्हो बाल्दै मनकारी विष्णु, सरकारी राहत फिर्ता !